TOP NEWS:Kenya oo qaadadatay Go’aan rasmi ah Doorashadii Maxamed Cabdulaahi Farmaajo Kadib.. - Hablaha Media Network
TOP NEWS:Kenya oo qaadadatay Go’aan rasmi ah Doorashadii Maxamed Cabdulaahi Farmaajo Kadib..
HMN:- Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa is hortaagtay go’aanka ay dowladda ku dooneysay inay ku xirto xerada qaxootiga ee Dhadhaab, qaxootiga halkaa ku noolna ay dib ugu celiso Soomaaliya.
Maxkmadda sare ayaa go’ankaasi ku tilmaantay mid aan dastuuri ahayn.Waxaa kale oo ay sheegtay in go’aankaasi uu xadgudub ku yahay xuquuqda qaxootiga.
”Go’aanka dowladda wuxuu si gooni ah u bartilmaameedsanayaa qaxootiga Soomaalida taasoo ah mid sharci darro ah, sidaas darteedna waxaan go’aankaasi ka sooq aaday mid aan waxba ka jirin” ayuu yiri John Mativo, xaakimka maxkamadda sare.
Hay’addaha u dooda xuquuqda aadanaha ee sida Human Right Watch iyo Amnesty international ayaa soo dhoweeyey go’aanka maxkamada waxa ayna sheegeen in uu yahay mid taarikhi ah.
Human Right waxay sheegtay in go’aanka maxkamada uu ka turjumayo in maxakmada ay doonayso in ay ilaaliso xuquuqda qaxootiga.